Madaxweynaha Uganda oo sheegay in qaraxyadii ka dhacay Kampala laga soo abaabulay Somalia – Radio Somit
Yoweri Museveni Madaxweynaha dalka Uganda ayaa sicad waxaa uu u sheegay in weerarradii ismiidaaminta ahaa ee dhawaan ka dhacay Caasimadda dalkaasi ee Magaalada Kampala laga soo abaabulay dalalka Soomaaliya iyo Kenya.
Madaxweyne Yoweri Museveni oo Wareysi siiyay Reuters waxaa uu hadalkiisa uu intaaasi ku daray in dowladda Uganda ay heeyso cadeeymo ku aadan in weeraradaas ay soo diyaariyeen kooxo iska soo abaabulay Soomaaliya Kenya, iyada oo ay mas’uuliyadiisa sheegteen Kooxda Daacish.
“Qaraxyadii Kampala ka dhacay dhawaan, waxaan haynaa xoogaa calaamado ah oo ah inay isku dubarideen kooxaha ku sugan Kenya iyo Soomaaliya,” ayuu Museveni ku yiri wareysi uu siiyay Reuters.
Qaraxyadii ka dhacay Magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa waxaa mas’uuliyadooda sheegtay Kooxda Daacish, waxaana inta la xaqiijiyay ku dhintay ilaa lix qof halka 30 kale ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo u badan dad rayid ah.
Dowladda Uganda ayaa waxaa xusid mudan in Soomaaliya ay ka joogaan kumanaan askari oo ku howlgalla Magaca howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM, kuwaas oo Ciidamada dowladda ka caawiya dagaalka lagula jiro Ururka Al-Shabaab.